I-PEC ye-ANC eFree State, namanye amagatsha avinjelwe ukuhambela inkomfa | News24
I-PEC ye-ANC eFree State, namanye amagatsha avinjelwe ukuhambela inkomfa
Bloemfontein - INkantolo eNkulu yaseBloemfontein isivimbele amagatsha ambalwa aseFree State ukuba ahambele ingqungquthela kazwelonke yokukhethwa kobuholi ngemuva kokuthi inkantolo ihlakaze i-PEC.
Le nkantolo iphinde yakhipha isinqumo sokuthi inkomfa yokukhethwa kobuholi eFree State kanye nezinqumo ezathathwa kuyo akukho semthethweni.
Lokhu kuchaza ukuthi iProvincial executive committee (PEC) eyakhethwa kule nkomfa ngeke ivunyelwe ukuhambela ingqungquthela kazwelonke. Nokho, inkantolo iyalele ukuthi amagatsha imihlangano yawo eyayingaphikisani nalokhu, ayihambele ingqungquthela.
Inkantolo iyalele ukuthi amagatsha angu-14 namalungu e-PEC angu-27 ngeke bavunyelwe ukuba bavote enkomfeni kaKhongolose ngoMgqibelo.
Abameli bamalungu ayengagculisekile bafaka lesi sicelo, befuna ukuthi inkomfa yesifundazwe ithathwe njengengekho emthethweni kuphinde kunqatshelwe izithunywa zesifundazwe ekutheni zivote engqungqutheleni.
INkantolo eNkulu yaseBloemfontein ngesonto eledlule yanquma ukuthi isifundazwe ngeke sikwazi ukubamba inkomfa kuze kube kuqalwa phansi imihlangano yamagatsha angu-29.
NgeSonto, uSihlalo we-ANC eFree State u-Ace Magashule, owaphinde waqokelwa kulesi sikhundla, wathi izikhulu zesifundazwe zawuthobela umyalelo wenkantolo.